Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 24/03/2020)
Noravank no iray amin'ireo tena manan-tantara sy ny monastera malaza itambaram-be ao Vayots Dzor faritanin'i. Ny fiangonana dia nanodidina amin'ny maranitra mena vato, ary ny mampivarahontsana toerana tsara tarehy dia iray amin'ireo tsara indrindra antony hijery Armenia. Ny manan-tantara Noravank naorina ao ny 13faha taonjato sy fomba "Vaovao Monasitera" eo amin'ny armeniana. Ny monasitera lasa ara-kolontsaina sy fanabeazana afovoan-Armenia.
Tatev iray ny firavaka ny armeniana maritrano. Ny monasitera dia naorina ny faha-9-taonjato faha-13 dia ny fanabeazana ny foibe, ary manana dikany ara-tantara ho an'ny armeniana tantara. Ny anaran ' ny monastera manana ny mahaliana niaviany. Misy ny tsara sy mampihetsi-po angano momba ny tompony, izay naorina ny monasitera. Izy dia maniry fatratra ny hahita ny sangan'asa avy amin'ny lanitra ary maniry mba manana elatra nanontany an ' Andriamanitra ny hanome azy elatra.
Sagrada Familia dia ny tena nitsidika fiangonana malaza ao Espaina. Fanorenana ny tsangambato nanomboka ho ofisialy 1882. Architect Francisco de Paula do Villar mahazatra natao tao amin'ny fomba Gothic. fa, in 1883 Antoni Gaudi niova tetikasa sy hanorina ny maritrano maoderina izay no malaza any amin'izao tontolo izao. Fanorenana mety ho vita ao 2026, noho ny fahatsiarovana ny Antoni Gaudi ny fahafatesana.
Ny mpanao maritrano efa nikasa ny hanorina 12 tilikambo, nanokan-tena ho an'i Jesosy Kristy sy ny Mpianany, iray ny renin ' i Jesosy, efatra ho fahatsiarovana ny Evanjelistra. Amin'izao fotoana izao, efa vita valo tilikambo. Ao anatiny ny fiangonana, Gaudi natao ny andry ao amin'ny endriky ny ny hazo slim vatan-kazo izay hahatonga ny ala fomba. Avy an-tampon ny tempoly,, ianao dia afaka mahita mahavariana ny fomba fijeriny tao an-tanàna.
Hisorohana ny fiangonana no mahatahotra indrindra ireo any Norvezy. Izany dia vita ao 1180 ary dia natokana ho Apôstôly Andrew. Ity karazana fiangonana no tena zava-dehibe malaza tsangambato ny Norvezy ny maritrano. Ny sasany ny mihantahanta toetra dia ny extravagantly sokitra ny vavahadin-tserasera sy ny lakroa sy ny sary sokitra ny dragona ny lohany eo amin'ny tafo. Fomba io dia niely tao Skandinavia, ary ampiasaina any grande-Bretagne loatra.
Ny faritra nanodidina ny manan-karena manan-tantara lova. Vindhellavegen efa miorina akaikin'ny am-piangonana ary manoro hevitra tsara tarehy mandeha mety. Ity lalana manan-tantara nahazo loka "Norvezy ny tsara tarehy indrindra lalana" ny zavatra Bahoaka Lalana Fitantanan-draharaha ao 2014.
Duomo no misy ao amin'ny faritra avaratr'i Milan, izany indrindra katedraly dia iray amin'ireo tena mahatahotra ary manintona ny rafitra eto amin'izao tontolo izao. Ny Tompo sy ny Arsevekan'i Milan faniriana ny hanorina tsy manam-paharoa ny Katedraly izay mety hahatonga ny firenena mba hahatsapa ny voninahitr ' Andriamanitra sy ny tanàna fifandraisana. Ny fanorenana ny Duomo anjara constructors, mpanao asa tanana, ary ny mpanao asa tanana avy manerana an'i Eoropa. Isaky ny mpiasa ny traikefa sy ny fahazotoana nanampy ny mamorona Iraisam-pirenena Gothic Duomo.
Fomba izany dia voafaritra amin'ny alalan'ny ambony sy ny lehibe ravaka. Manodidina ny rafitra dia ny 3400 - tsangambato, 135 gargoyles, ary 700 marbra olo-malaza izay mampiavaka Duomo. From fara tampony ambony indrindra, izay afaka hiakatra ny tohatra na maka ny hanandratra, dia ho hitanao ilay tsara tarehy Madonnia, volamena solontena sarivongan'i Maria sy eo amin'ny mazava andro dia afaka mankafy mahatalanjona ny fomba fijeriny ny Milan.
Hallgrimskirkja fiangonana dia ny ambony indrindra sy lehibe indrindra-trano ao Reykjavik ary hita manerana ny tanàna. Ny fiangonana dia 74,5 metatra ambony sy ny mpizaha tany afaka miditra amin ' ny fiangonana sy mankafy ny goavana view. Ny fanorenana ny fanorenana nanomboka tamin'ny 1945 ary vita tamin'ny 1986. Ny modernist fiangonana toy izany koa ny basalt mitosaka mivoaka, rehefa mitosaka cools ho any amin'ny vatolampy.
Ny fantsona dia lavitra avy efatra boky sy ny pedal. Misy 102 laharana, 72 mijanona, ary 5275 fantsona sy ny dia 15 metatra lava, milanja mihoatra ny 25 feo. Ny trano dia mahery ary afaka mameno ny fanahy sy ny lehibe toerana. Ny fanorenana ny taova dia vita amin'ny 1992 ary dia nampiasaina ho an'ny isan-karazany ny fandraisam-peo.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ficonic-churches-and-monasteries-in-europe%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)